Kana manzwiro atinoita munhuwi aremara | Faraitose's Blog
Zvinoitika kuti hunhuhwi, manzwirwo ahungaitwe nemunhu, hunogona kuva sekunge hwadzikira, kana kuti haupo kana zve kuti hausi nemazvo. Zvikadaro iri hosha zvinogona kutambudza munhu hutano hwake; kuisa munhu pangozi kana achitadza kunhuhwidza zvingamukuvadze nekutadzisa magariro ehupenyu hwakafaranuka.
Kana kugona kunhuhwihwa chinhu kwakarurama kunonzi normosmia [normal osmia], kana kuti unhuhwikwazvo. Asi kana kugona kunhuhwa chinhu kusiri kwazvo kunogona kuva kuri
Kutadza kunzwa munhuhwi wechinhu chipi zvacho. Uku kunonzi anosmia [an osmia], kuri kwatingati nechekwedu tadzeunhuhwi, shayeunhuhwi.
Kunzwa hunhuhwi hwechinhu asi kuri kunzwira kure, semunhuhwi wakaderera: hyposmia [hypo osmia] kana kuti dzikounhuhwi.
Kwekuti manzwirwo ehunhuhwi anenge akapesana nemunhuhwi wechinhu chacho zvekuti chinhu chinenge chine hunhuhwi usirihwo: dysosmia kana kuti pesaunhuhwi.
Munhuhwi hwechinhu hukapesana nemanzwiro ahwo zvinogona kunge zviri zvekuti
chinhu chacho hachipo phantosmia [phantom osmia], kana kuti unhuhwipasina.
munhuhwi wacho wachiri kunzi chinahwo hausi wo wachinacho: parosmia / troposmia, kana kuti unhuhwitsveru.
Kugona kunhuhwa chinhu zvino kwanisika sei ? Mukatikati memhuno, nechekumusoro kwayo, mune ganda remukati remiyukoza rakavharira mapfupa anoti cribriform plate, superior nasal septum ne superior turbinate. Muganda iri [olfactory mucosa: gandagwema] imuyukoza yeunhuhwi ndimo munotangira zvese, mune manzwisa egweme [manzwisagweme] anoti akatekenywa nemamorekuru eguhwi anobva abaka. Nzwisa yegayega inemubakiro wayo kana yatekenywa. Hubaki hwacho hunotevedza nzira yetsinganzwa inopinga muuropi huripo seri kwemapfupa arehwa. Kusanganiswa kunoitwa hubaki hwenzwisa dzese muuropi ndihwo hwatinoti ‘munhuhwi’ wechinhu. Nzira yeunhuhwi iyi ika dimbuka ndipo patinova ne tadzeunhuhwi. Manzwisa kana kuti uropi zvika baka zvega pasina munhuhwi ndipo patinova ne unhuhwipasina. Kana manzwisa kana uropi zvisinga bake nemazvo ndipo patinoita unhuhwitsveru.
Kuti chinhu chive nehwema zvinotoda kuti chive nekamweya [volatile substances], kagweme kanobva pachiri kachipinda mumhepo. Kagweme aka mamorekuru echinhu chacho ekuti akamhara pagandagwema remumhuno ano tekenya manzwisagweme akasiyanasiyana. Munhuhwi wakasimba unodaro nemasimbiro ahunoita pakutekenya manzwisagweme. Izvi zvinogona kuva nekuti gweme racho rakawanda kana kuti gweme racho rino tekenya zvakasimba.